Showing posts with label စိတ်ခွန်အားဖြည့်စာစုများ. Show all posts
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Friday, August 31, 2012 Friday, August 31, 2012 Labels: စိတ်ခွန်အားဖြည့်စာစုများ
ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာ အိမ်မှာ ငြိမ်ငြိမ်မနေရဘဲ ဟိုသွား ဒီသွားနဲ့ ခရီးသွားလာရတဲ့ အလုပ်တွေနဲ့ ရှုပ်နေတာနဲ့ပဲ စာအသစ် မရေးဖြစ်တာ နည်းနည်း ကြာသွားခဲ့ပါတယ်။ စာအသစ်တွေ အရင်လို မရေးနိုင်ခင်မှာ သွားရင်း လာရင်း ကားပေါ်မှာ၊ ခရီးမှာ မထင်မှတ်ပဲ Angry Birds ဆိုတဲ့ ဂိမ်းကို ကျွန်မ ကစားမိခဲ့စဉ်က ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေနဲ့ တွေးမိတဲ့ အတွေးအမြင်တွေ အကြောင်း ပြောပြချင်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့်တော့ ကျွန်မဟာ ဂိမ်းတွေ ဘာတွေကို ဆော့လေ့ ဆော့ထ ရှိတဲ့သူ တစ်ယောက် မဟုတ်ပါဘူး။ အလုပ်များတာရယ်၊ ရှားရှားပါးပါး ရတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် အချိန်၊ စာရေး စာဖတ်လုပ်ချိန်တွေထဲကနေ ဖဲ့ပြီး မပေးချင်တာရယ်၊ အစလုပ်ပြီး မကစားချင်တာရယ် စတာတွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဂိမ်းတွေရဲ့ ထုံးစံကလည်း စ ကစားမိရင် စွဲလန်းတတ်တာကြောင့်လည်း အစလုပ်ပြီး မကစား ချင်တာပါ။ ဂိမ်းတွေ ဘာတွေ ဆော့ဖို့ သိပ်စိတ်မဝင်စားတဲ့ ကျွန်မရဲ့ဖုန်းထဲကို ညီမလိုခင်တဲ့ တစ်ယောက်က လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်လလောက်ကမှ Angry Birds ဆိုတဲ့ ဂိမ်းလေးကို ဖုန်းထဲမှာသွင်းပေး သွားခဲ့ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာနဲ့တောင် ဂိမ်းတွေ ဆော့လေ့မရှိတဲ့ ကျွန်မဟာ ဖုန်းထဲကို ရောက်လာတဲ့ Angry Birds ဂိမ်းကို ဖုန်းပေါ်မှာ တွေ့နေပေမဲ့ ယောင်လို့တောင် ဖွင်မကြည့်မိပါဘူး။ တစ်ရက်မှာတော့ ခရီးတစ်ခု သွားရင်းနဲ့ တစ်နေရာမှာ ကိစ္စတစ်ခုကို စောင့်ဆိုင်းစရာ ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဖတ်စရာစာအုပ်လည်း ပါမသွားတဲ့ ကျွန်မဟာ ဖုန်းထဲမှာ ထည့်ထားတဲ့ စာအုပ်တွေကို Adobe reader နဲ့ ဖတ်နေခဲ့ပါတယ်။ ဖတ်လက်စ စာမျက်နှာတွေဟာ မကြာခင်မှာဘဲ ဖတ်လို့ ပြီးသွားတာနဲ့ ဖုန်းကိုကလိရင်း အဲဒီ Angry Birds ဂိမ်းကို စူးစမ်းတဲ့ အနေနဲ့ စမ်း ကစားမိပါတယ်။
စပြီး ကစားလိုက်ရာကနေ ဂိမ်းရဲ့ လွယ်ကူရှင်းလင်းတဲ့ User Interface၊ ဂိမ်းထဲမှာ ပါဝင် လှုပ်ရှားတဲ့ ဇာတ်ကောင်လေးတွေရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုတွေကြောင့် အဲဒီနေ့က လယ်ဗယ်တစ်ခုပြီးတစ်ခု ပြီးတဲ့ အထိ တစ်ဖြည်းဖြည်း ဆော့သွားခဲ့မိပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ လယ်ဗယ်မြင့်လာတာနဲ့အမျှ ပိုပိုပြီး ခက်ခဲလာသလို ခက်ခဲတဲ့ လယ်ဗယ် တစ်ခုခုကို အကြိမ်ကြိမ် ပြန်ပြန်ဆော့ရတာတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒီနေ့နောက်ပိုင်း ခရီးကနေ အိမ်ပြန်ရောက်တော့လည်း အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ အားလပ်ချိန်တွေမှာ အဲဒီ Angry Birds ဂိမ်းကိုဘဲ ပြန်ကစားမိပါတယ်။ အဲဒီဂိမ်းနဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီးသား ကစားဖူးတဲ့သူတွေကတော့ အတော်များများ သိပြီးသားဖြစ်ကြမှာပါ.. လယ်ဗယ်တစ်ခုကို အောင်မြင်ပြီးမှ နောက်ထပ် လယ်ဗယ်အသစ် တစ်ခုကို ဆက်ကစားလို့ ရတာမျိုးပါ။ အဲဒီတော့ ဒီလယ်ဗယ် တစ်ခုကို မအောင်မြင်နိုင်ရင် နောက်ထပ် လယ်ဗယ်အသစ်တွေကို ဆက်ဆော့ရဖို့ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အစပျိုးပြီး ဆော့လိုက်မိတဲ့ ကျွန်မဟာ အချိန်အားရတာနဲ့ Angry Birds ကို ဆော့နေမိတတ်ခဲ့ပါတယ်။ လယ်ဗယ်တစ်ဆင့်ပြီး တစ်ဆင့် ကစားနေရင်း အတော်ကိုခက်ခဲတဲ့ အဆင့်တွေမှာ မအောင်မြင်မချင်း အချိန် တော်တော်ကြာကြာ ထပ်တလဲလဲ ကစားပါတယ်။ တခါတလေများ လုံးဝကို အောင်မြင်တော့မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်မိတဲ့အထိ ခက်ခက်ခဲခဲ ကစားရတာတွေ ရှိပါတယ်။ ခက်ခဲတယ် ဆိုတာကလည်း ကျွန်မအတွက် ဆိုလိုတာပါ။ ဂိမ်းတွေဘာတွေ သိပ်ဆော့လေ့မရှိတဲ့ ကျွန်မ အတွက်တော့ အခြားသူတွေအတွက် မခက်ခဲဘူး ထင်ရတဲ့ ဂိမ်းတွေကလည်း ကျွန်မအတွက် ခက်ခဲချင် ခက်ခဲနေနိုင်တာမျိုးပါ။
တခါတလေများ ရေချိုးဖို့ ပြင်နေချိန်မှာတောင် ခဏလောက်ဆိုပြီး ဂိမ်းဆော့မိရင် မပြီးနိုင်တော့အောင် ဖြစ်ရပါတော့တယ်။ ခက်ခက်ခဲခဲ ဂိမ်း တစ်ခုခုကို ဆော့မိရက်သား ဖြစ်နေရင်းများ ရေတောင် ဆက်မချိုးနိုင်အောင် ဖြစ်သွားရပါတယ်။ ကျွန်မစိတ်ထဲမှာလည်း ငါ ဒီဂိမ်းကို မရမချင်း ရေမချိုးဘူး ဆိုပြီး ဇွတ်ပေပြီးကို ဆော့နေတတ်တာပါ။ အဲဒီခါများဆို တကယ်လဲ အဲဒီဂိမ်း မအောင်မြင်အချင်း ရေမချိုးဘဲ ဆော့နေတာဟာ နောက်ဆုံး အောင်မြင်သွားပြီ ဆိုတော့မှသာ စိတ်ဖြောင့်ဖြောင့်နဲ့ ရေ ဆက်ချိုးဖြစ်ပါတယ်။ မှန်တာပြောရရင် တစ်ချို့ဂိမ်းဆို အဲဒီလယ်ဗယ်မှာတင် ၃-ရက်လောက် ထပ်ခါတလဲလဲ ဆော့ရတာမျိုးလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ ၃-ရက်ဆိုတာကလည်း တစ်ချိန်လုံး ဆော့နေနိုင်တာမျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး. အားလပ်ချိန်ရတဲ့အခါတွေမှာ ကစားတာကို ဆိုလိုတာပါ။ တစ်ချို့ဂိမ်းတွေက တစ်ကြိမ်တည်းနဲ့ အောင်မြင် သွားတာမျိုး ရှိသလို တစ်ချို့ကျတော့ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ မရေမတွက်နိုင်အောင် ဆော့မှ အောင်မြင်တာမျိုး တွေ ရှိတာပါ။ အဲဒီလို ခက်ခက်ခဲခဲ ကစားရတဲ့ ဂိမ်းတွေကို လက်လျှော့ မိတော့မလိုအထိ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း တစ်ခုခုဆို ကစားလက်စဘဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်လက်စဘဲဖြစ်ဖြစ် မအောင်မြင်မချင်း မကျေနပ်တတ်တဲ့ ကျွန်မဟာ အဲဒီဂိမ်းကို မကျော်နိုင်မချင်း မရရအောင် ဆော့ပါတယ်။
တကယ်လို့ ကျွန်မသာ လွယ်လွယ်ကူကူ လက်လျော့လိုက်ရင် နောက် ဂိမ်းလယ်ဗယ်တစ်ခုကို ဆက်တက်နိုင်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး.. အောင်မြင်မှုရဲ့ အရသာကိုလည်း ခံစားရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဂိမ်းတစ်ခုမှာ ခက်ခဲတဲ့ လယ်ဗယ်တစ်ခုကို အချိန်ကြာကြာဆော့လေ ဘယ်လို ကစားရင် နိုင်နိုင်တယ် ဆိုတဲ့ လမ်းကြောင်းကို တွေ့မြင် လာလေ ဖြစ်တဲ့အခါ နောက်ဆုံးမှာတော့ အဲဒီ လယ်ဗယ်ကို အောင်မြင်အောင် ကျော်ဖြတ်သွားနိုင် တာချည်းပါဘဲ။ ဒါပေမဲ့ ခက်ခက်ခဲခဲ ကစားရတဲ့ ဂိမ်းတွေကို အောင်နိုင်သွားတဲ့ အခါ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ စိတ်ခံစားချက်နဲ့ ပျော်ရွှင်မှုက ကျေနပ်စရာ ကောင်းပါတယ်။ ကျွန်မဆိုရင် ခက်ခက်ခဲခဲ လယ်ဗယ်တစ်ခုခုကို အောင်မြင်သွားတိုင်း လက်သီးလက်မောင်းတောင် တန်းပြီး အော်ဟစ်မိတာပါဘဲ။
ကျွန်မဟာ အဲဒီဂိမ်းတွေကို ကစားနေရင်းမှာဘဲ ကျွန်မစိတ်ထဲ တွေးမိလာတာက ဂိမ်းတွေဟာ ယခုလက်ရှိ လူတွေရဲ့ ဘဝမှာတွေ့ကြုံခံစားနေရတဲ့ ပြဿနာတွေ၊ အခက်အခဲတွေ၊ ဒုက္ခတွေနဲ့ တူလှတယ် လို့ တွေးမိလာတာပါ။ တစ်ချို့အခက်အခဲတွေက လွယ်ကူတယ်.. ရိုးရှင်းတယ်.. ဒီတော့ လွယ်လွယ် ကူကူနဲ့ ဖြေရှင်းနိုင်တယ် .. ကျော်ဖြတ်နိုင်တယ်.. တစ်ချို့ပြဿာနာတွေ အခက် အခဲတွေများ ကျတော့ ကျွန်မ ဆော့နေတဲ့ ဂိမ်းတစ်ချို့ကို ခက်ခက်ခဲခဲ ကစားရသလို ပြဿနာတွေ ကိုလည်း ခက်ခက် ခဲခဲ ဖြေရှင်းရတာ၊ ကျော်ဖြတ်ရတာတွေ ရှိလာပါတယ်။ တစ်ချို့ ပြဿနာများဆို ဖြေရှင်းဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး.. ဖြေရှင်းနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကို ထင်မိ ရလောက်အောင် ကြီးမား ခက်ခဲတတ်တာကို တွေ့ရမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ စိတ်မပျက်ဘဲ စိတ်ရှည်ရှည်ထားပြီး ဖြေရှင်းရင် မအောင်မြင်တဲ့ ပြဿနာ ၊ မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ အခက်အခဲဆိုတာ မရှိသလောက်ပါဘဲ.။ တစ်ကယ်တော့ ဘဝဆိုတာဟာလည်း ဂိမ်းတစ်ပွဲ ကစားရခြင်းနှင့် အသွင်သဏ္ဍာန် အရသာ ကွဲပြားပေးမယ့် အနှစ်သာရခြင်းကတော့ အတူတူပဲ မဟုတ်ပါလား။
ဒီတော့ ကျွန်မရဲ့ အမြင်အရတော့ ဘဝမှာ ကြုံတွေ့ရတဲ့ အခက်အခဲတွေဟာ ဂိမ်းကစားရတာနဲ့ တူလှတယ်လို့ ဆိုချင်ပါတယ်။ ဒီနေ့ နေ့တဓူဝ ကျွန်မတို့ တတွေ ထိတွေ့နေကြတဲ့ ကွန်ပြူတာတွေ၊ စမတ်ဖုန်းတွေ အစရှိတာတွေထဲက ဂိမ်းတွေကစားတဲ့အခါမှာ လယ်ဗယ်တစ်ခုပြီးတစ်ခု အောင်မြင်ချင်ရင် ဇွဲရှိဖို့ လိုအပ်သလို စိတ်ရှည်ရှည်ထားဖို့လည်း အလွန်လိုအပ်ပါတယ်။ ဂိမ်းတစ်ခုရဲ့ အဆင့်တိုင်း အဆင့်တိုင်းစီမှာ မတူထူးခြားတဲ့ အခက်အခဲတွေ၊ အတားအဆီးတွေ ရှိနေတတ်တာဟာလည်း ဂိမ်းတွေရဲ့ သာဘဝပါပဲ။ အဲဒီလို ဂိမ်းကစားရင်း တွေ့လာရတဲ့ အဆင့်တိုင်းက အခက်အခဲတိုင်းကို တစ်ကြိမ်တစ်ခါ ကျော်ဖြတ်ရုံနဲ့ အောင်မြင်ဖို့ ဆိုတာဟာလည်း အပေါ်ကို အဆင့်မြင့်မြင့် ရောက်လာလေ ဖြစ်နိုင်ခြေ ပိုပိုနည်းလာလေပါပဲ။ အဲဒီလို အဆင့် တစ်ခုစီကို ဖြတ်ကျော်တဲ့ အခါ တစ်ကြိမ်တစ်ခါနဲ့ မရ၊ ကျရှုံးသွားတဲ့ အချိန်တွေမှာ ဂိမ်းကစားသူရဲ့ စိတ်ရှည်မှု၊ ဇွဲရှိမှုပေါ် မူတည်ပြီး အဲဒီ ကျရှုံးမှုကနေ သင်ခန်းစာယူ၊ မိမိရဲ့ အားနည်းချက်ကို မိမိဘာသာ မြင်အောင်ကြည့်ပြီး ပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းပြင်ဆင်၊ မိမိ ဖြတ်ကျော်လိုတဲ့ အခက်အခဲမှာ ဘယ်လို အားနည်းချက် ရှိသလဲ တွေ့အောင်ရှာပြီး လက်မလျော့ပဲ အကြိမ်ကြိမ် ထပ်ကြိုးစားသွားမယ် ဆိုရင် တစ်ကြိမ်မဟုတ် တစ်ကြိမ်မှာတော့ မိမိဖြတ်ကျော်လိုတဲ့ အခက်အခဲကို အောင်မြင်စွာ ဖြတ်ကျော်နိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သေသေချာချာ တွေးကြည့်မယ် ဆိုရင် ဘဝမှာကြုံရတဲ့ အခက်အခဲတွေဟာလည်း ဂိမ်းတွေထဲကလိုပါပဲ။ ကြုံရတဲ့ ပြဿနာ၊ အတားအဆီး တစ်ခုခုဟာ ပထမမှာတော့ စိတ်ညစ်စရာ၊ စိတ်ပျက်စရာ လို့ ထင်စရာပါ။ ဒါပေမယ့် အခက်အခဲ တစ်ခုကို ကျော်ဖြတ်ပြီးတိုင်း ကျော်ဖြတ်ပြီးတိုင်းမှာ ရရှိတဲ့ ခံစားမှုဟာ ဘယ်အရာနဲ့မှ မတူအောင် မိမိကိုယ် မိမိ ကျေနပ်၊ ယုံကြည်မှု၊ ရင့်ကျက်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်တယ် ဆိုတာ အခက်အခဲတွေ အများကြီးကို အကြိမ်ကြိမ် ရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်ဖူးကြတဲ့ သူတွေ အနေနနဲ့ လေးလေးနက်နက် တွေ့ကြုံ ခံစားဖူးကြမှာပါ။ အခက်အခဲမကြုံဖူး၊ အခက်အခဲကို မကျော်လွှားဖူးဘဲနဲ့ ရင့်ကျက်တဲ့သူ တစ်ယောက် ဖြစ်လာဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အဲဒီအတွက် ကျွန်မ ပြောလိုက်ချင်တာကတော့ ကျွန်မတို့ ဘဝမှာ ကြုံရတဲ့ အခက်အခဲတွေဟာ တစ်ကယ်တော့ ဘဝကို ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားကောင်းအောင်၊ မိမိကို ပိုပြီး ရင့်ကျက်တဲ့လူ၊ ယုံကြည်မှု ရှိတဲ့လူ၊ ကိုယ့်အခက်အခဲတွေကို ကျော်လွှားနိုင်သလို သူတစ်ပါးတွေကိုလည်း အခက်အခဲတွေ ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ လမ်းပြပေးနိုင်တဲ့ သူ ဖြစ်လာစေတဲ့ အတွက် အခက်အခဲတွေကို အခက်အခဲတွေလို့ ရိုးရိုး မရှုမြင်ဘဲ စိန်ခေါ်မှုတွေ အဖြစ် ပြောင်းလဲ ရှုမြင်ပြီး ဇွဲရှိရှိ၊ လုံ့လ ဝီရိယကောင်းကောင်းနဲ့ စိတ်ရှည်ရှည်ထားပြီး ရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်သွားကြဖို့ အလွန်ပဲ လိုအပ်လှပါတော့တယ်ရှင်။ ။
အနီရောင် မဟော်ဂနီ စန္ဒရား
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Sunday, July 29, 2012 Sunday, July 29, 2012 Labels: စိတ်ခွန်အားဖြည့်စာစုများ
ကျွန်တော်က စိန့်လူးဝစ်မှာရှိတဲ့ စန္ဒရား ကုမ္ပဏီတစ်ခုက အရောင်းဝန်ထမ်းပါ။ ကုမ္ပဏီက ထုတ်လုပ်တဲ့ စန္ဒရားတွေကို မြို့နယ်အနှံ့ လိုက်လံရောင်းချသလို သတင်းစာတွေမှာလည်း ကြော်ငြာထည့်ပြီး ဝယ်လိုသူ ထံက အမှာစာ ရောက်လာရင် မှာတဲ့ သူတွေဆီကိုလည်း လိုက်ပြီး ပို့ပေးပါတယ်.. စန္ဒရား ကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ထရပ်ကား အသေးလေးပေါ်တင်ပြီး မှာတဲ့သူရဲ့ အိမ်ကို အိမ်တိုင်ယာရောက် လိုက်ပို့ပေးတာပါ။ မစ်ဇူရီပြည်နယ်ရဲ့ အရှေ့ပိုင်း ဆိုတာ ဝါဂွမ်းကို အမြောက်အမြား စိုက်ကြတဲ့ ဒေသပါ.. အဲဒီဒေသက သတင်းစာ တွေထဲမှာ ကြော်ငြာထည့်ပြီးတိုင်း ပိုစ့်စကတ်လေးတစ်ခု ကျွန်တော်တို့ဆီကို အမြဲတမ်း ရောက်လာ တတ်ပါတယ်.. အဲဒီပေါ်မှာ ရေးထားတဲ့ စာက “ကျေးဇူးပြုပြီး စန္ဒရား အသစ်စက်စက် တစ်လုံးကို ကျွန်မရဲ့ မြေးမလေးအတွက် ပို့ပေးပါ.. အဲဒီ စန္ဒရား အရောင်က အနီရောင် မဟော်ဂနီသားနဲ့ ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်.. တစ်လကို ၁ဝဒေါ်လာနှုန်းနဲ့ တန်ဖိုးကျေသည်အထိ လစဉ် ငွေချေ ပါမယ်.. ” ဆိုတဲ့ စာတွေကို မသေမသပ်မညီမညာ လက်ရေးတွေနဲ့ ပို့စကတ် တစ်ခုလုံးကို ပြည့်အောင် ထပ်ခါ ထပ်ခါ ရေး ထားပြီး ပိုစ့်စကတ်ရဲ့ အပေါ် မျက်နှာစာတွေမှာပါ ပြည့်အောင် ရေးထားတတ်ပါတယ်။
စဉ်းစားကြည့်ပါဗျာ.. စန္ဒရား အသစ်တစ်လုံးကို တစ်လ ၁၀ဒေါ်လာ ငွေသွင်းမဲ့စနစ်နဲ့ ဘယ်သူကများ အကြွေးရောင်းပေး နိုင်ပါ့မလဲ.. ဘယ်အာမခံ ကုမ္ပဏီကရော ဒီလောက် ငွေလေးကို ကြားဝင်ပြီး အာမခံပေးရဲပါ့မလဲ.. ဒါနဲ့ဘဲ ကျွန်တော်တို့လဲ အဲဒီပိုစ့်ကတ်နဲ့ စာကိစ္စကို လစ်လျှူရှုလိုက်ကြပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ ထပ်ခါထပ်ခါ ရောက်လာတဲ့ ပိုစ့်စကတ်ကြောင့် အဲဒီအဖွားအို ဆီကို အရောက်သွားလို့ အခြေအနေကို စုံစမ်းဖို့ ကျွန်တော့်ကို ကုမ္ပဏီက လွတ်လိုက်ပါတယ်။
တမျှော်တခေါ် ၀ါဂွမ်းစိုက်ခင်းကြီးရဲ့ အလယ်မှာရှိတဲ့ အလုပ်သမား တန်းလျားတစ်ခုက အဖွားအို နေထိုင်ရာ အိမ်ခန်းကလေးဆီကို ကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့ အချိန်မှာ မျှော်လင့်တာထက် ကြည့်ကောင်းတဲ့ ရုပ်ရည်ရှိတဲ့ အဖွားကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်.. သူတို့ရဲ့ ယာတဲ အိမ်ခန်း တစ်ခုလုံးဟာ ဖုန်မှုန့်တွေနဲ့ ပေကျံနေပြီး အိမ်ထဲမှာလည်း မွေးထားပုံရတဲ့ ကြက်မျိုးစုံကို ပြေးလွှားဆော့ကစားနေတာကို တွေ့ရပါတယ်.. ကြည့်တာနဲ့တင် သိသာထင်ရှားပါတယ်.. သူမတို့ဟာ ဘယ်အရာကိုမှ အကြွေးနဲ့ ၀ယ်ပြီး ကျေအောင် ပြန်ဆပ်နိုင်မဲ့ပုံ မပေါ်ပါဘူး… ကားမရှိ၊ ဖုန်းမရှိ၊ ၀င်ငွေကောင်းတဲ့ အလုပ် တစ်ခု တစ်လေမှ မရှိတဲ့အပြင် အဖွားအိုရဲ့ ခေါင်းပေါ်က အိမ်အမိုးဟာလည်း အပေါက်အပြဲတွေနဲ့.. အလင်းရောင် တွေကလည်း အမိုးရဲ့ နေရာအနှံ့မှာရှိတဲ့ အပေါက်တွေကနေ ဖြာကျနေ တာကို တွေ့ရပါရဲ့.. ၁၀နှစ်လောက် အရွယ်ရှိတဲ့ သူ့ရဲ့မြေးမလေးကတော့ ဖိနပ်မပါဘာမပါနဲ့ အဝတ် ကလေး ညစ်နွမ်းနွမ်းကို ၀တ်လို့. ကြက်လေးတွေနဲ့အတူ ဆော့ကစားနေပါရဲ့။
ကျွန်တော်က အဖွားအိုကို ကျွန်တော်တို့ ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ စန္ဒရား အသစ်တစ်လုံးကို တစ်လကို ၁၀ဒေါ်လာ ငွေချေစနစ်နဲ့ ဘယ်လိုမှ မရောင်းပေးနိုင်ကြောင်း ရှင်းပြပါတယ်.. ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ဆီကို စာတွေ ရေးပို့နေတာကို ရပ်ဖို့ ကျွန်တော်က အလေး အနက် ပြောကြား ပါတယ်.. ပြောပြီးတော့ ကားမောင်းပြီး သူတို့ယာတဲအိမ်ကလေးကနေ ကျွန်တော် ပြန်ထွက်ခဲ့ပေမဲ့ ရင်ထဲမှာတော့ ခံစားချက် တစ်မျိုးနဲ့ ကျွန်တော့စိတ်တွေ နာကျင်လေးလံလို့ နေပါတယ်… သနားစရာ အဖွားအိုရဲ့ ဆန္ဒကို မဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တာ ၀မ်းနည်းဖို့ ကောင်းလှပါတယ်.. အင်း ကျွန်တော်လည်း သနားပေမဲ့ တတ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတော့ မဟုတ်ပါဘူးလေ။
ဒီလိုနဲ့ နောက် ၃နှစ်အကြာမှာ ကျွန်တော်ဟာ စန္ဒရား ထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့ ကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီလေးတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါပြီ.. ကျွန်တော့ ကုမ္ပဏီရဲ့ စန္ဒရားတွေကို သတင်းစာမှာ ကြော်ငြာတဲ့ အခါမှာတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃နှစ်က ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ ကုမ္ပဏီမှာ ရောက်လာတဲ့ ပိုစ့်စကတ်လေးအတိုင်း အနီရောင် မဟော်ဂနီ စန္ဒရားကို ပို့ပေးဖို့ တောင်းဆိုတဲ့စာ ရောက်လာပြန်ပါတယ်.. ကျွန်တော်ကရော ဘယ်လိုလုပ် တစ်လ ၁၀ဒေါ်လာနဲ့ စန္ဒရားတစ်လုံးကို ရောင်းပေးနိုင်ပါ့မလဲ.. ဟိုးအရင်ကလိုဘဲ ကျွန်တော်လဲ ဒီစာကိစ္စကို လစ်လျှူရှုထားလိုက်ပါတယ်.. ပိုစ့်စကတ်လေးနဲ့ စာတွေကတော့ အကြိမ်ပေါင်း မြောက်မြားစွာ ရောက်မြဲ ရောက်လာဆဲပါ။
တစ်နေ့မှာတော့ တစ်စုံတစ်ရာရဲ့ တွန်းအားတစ်ခုကြောင့် အဲဒီနေရာလေးကို ကျွန်တော့်ရဲ့ ထရပ်ကား အသေးလေးနဲ့ ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်. ကားပေါ်မှာတော့ အနီရောင် မဟော်ဂနီ စန္ဒရားလေးကို တင်လို့ပေါ့… ကျွန်တော်ဟာ အင်မတန်မှ ဆိုးဝါးတဲ့ စီးပွားရေး ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ခုကို ချခဲ့မိပြီဆိုတာ သိပေမဲ့လို့ စန္ဒရားကို သယ်ဆောင်လို့ အဖွားအိုဆီကို ရောက်သွားမိခဲ့ပါပြီ.. ပြီးတော့ အဖွားအိုကို ကျွန်တော်က ရှင်းပြပါတယ်.. ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် အာမခံပြီး စာချုပ်တစ်ခုကို ယူလာပါတယ်.. အဲဒီစာချုပ်မှာ စန္ဒရားကို ကျွန်တော့အနေနဲ့ အကျိုးအမြတ် လုံးဝမယူဘဲ ရောင်းပေးမှာ ဖြစ်ပြီး အဖွားအိုဘက်က တစ်လ၁၀ဒေါ်လာ နှုန်းနဲ့ ၅၂ လ တိတိ ငွေသွင်းဖို့ စတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ပါဝင်ပါတယ်.. အဖွားအိုကလည်း ကျေးဇူးတင်စွာနဲ့ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ လက်ခံသဘောတူပါတယ်။
စန္ဒရားကို ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် အဖွားအိုရဲ့ တဲအိမ်မှာ အိမ်အမိုး အပေါက် အနည်းဆုံး ဖြစ်နိုင် မဲ့ နေရာကို ရွေးချယ်ပြီး နေရာ ချပေးခဲ့ပါတယ်.. အဖွားအိုနဲ့ သူရဲ့ မြေးမလေးကို စန္ဒရားပေါ် ကြက်တွေ တက်မဆော့စေဖို့ သတိပေးစကား ပြောခဲ့ပါတယ်.. ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ သေချာ သိနေခဲ့တာက ကျွန်တော်ဟာ မသေချာ မရေရာဘဲ အလောင်းအစားတစ်ခုအနေနဲ့ စန္ဒရား အသစ်စက်စက် တစ်လုံးကို အလဟဿ ဖြစ်အောင် လုပ်လိုက်မိပြီ ဆိုတာပါဘဲ။
သို့သော်လည်း ငွေချေတဲ့အချိန်မှာတော့ သဘောတူ ကတိပြုထားတဲ့အတိုင်း အဖွားအိုဘက်က တစ်လမှ မပျက်ကွက်ခဲ့ပါဘူး.. တစ်ချို့လတွေမှာ ၁၀ဒေါ်လာပြည့်ဖို့ ငွေအကြွေစေ့တော်တော်များများ ပါဝင် လာတာကို တွေ့ရပါတယ်.. မယုံနိုင်စရာပါ .. ၅၂လတိတိ မပျက်မကွက် ပေးချေသွားခဲ့တဲ့ အင်မတန် ကတိတည်တဲ့ အရောင်းအ၀ယ်လေးတစ်ခုပါ.. ကျွန်တော် မထင်မှတ် ထားတဲ့ ဖြစ်ရပ်လေးတစ်ခုပါဘဲ.. ဒီလို ငွေအကြေ ချေနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတာ ယုံချင်စရာတောင် မရှိခဲ့ပါဘဲနဲ့.. အဖွားအိုဟာ မဖြစ်ဖြစ်အောင် လုပ်သွားခဲ့ပါပြီ။
နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကြာတဲ့အခါမှာတော့ ဒီအဖြစ်အပျက်တွေက ကျွန်တော့ အာရုံမှာ မှေးမှိန် ပျောက်ကွယ် သွားခဲ့ပါပြီ။ တစ်နေ့မှာ ကျွန်တော် မဲမ်ဖစ်ကို စီးပွားရေးကိစ္စတစ်ခုနဲ့ ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဟာ တည်းခိုတဲ့ ဟိုတယ်မှာဘဲ ညစာစားပြီးတော့ ဟိုတယ် ဧည့်ခန်းကြီးထဲက ဘားကောင်တာမှာ ထိုင်ပြီး အပျင်းပြေ တစ်ခုခု သောက်နေတုန်းမှာ အင်မတန်မှ သာယာငြိမ့်ညောင်းပြီး လက်ရာကောင်းလှတဲ့ စန္ဒရားသံလေးတစ်ခုကို ကျွန်တော် ကြားလိုက်ရပါတယ်.. ဘေးဝန်းကျင်ကို လိုက်လံရှာဖွေ ကြည့်မိတဲ့ အခါမှာတော့ ငယ်ရွယ်လှပပြီး ချစ်စရာ မိန်းခလေးတစ်ယောက်ဟာ သိပ်ကိုကောင်းမွန်ပြီး အဆင့် အတန်း မြှင့်လှတဲ့ စန္ဒရားတစ်လုံးကို တီးနေတာ တွေ့လိုက်ရပါတယ်။
စန္ဒရား ၀ါသနာပါတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ အသိစိတ်အရ သူမရဲ့ စန္ဒရားလက်သံဟာ အရည် အသွေး ကောင်း မွန် မြှင့်မား လှတာကို အသိအမှတ် မပြုဘဲ မနေနိုင်လောက်အောင် ဖြစ်မိပါတယ်.. ဒါနဲ့ သူကလေးရဲ့ လက်သံကို ကောင်းကောင်းကြားရနိုင်မဲ့ စန္ဒရားခုံနဲ့ အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့ စားပွဲကို သောက်လက်စ ခွက်ကလေး လက်ကကိုင်ပြီး ရွေ့လာမိပါတယ်. ကျွန်တော့်ကို မြင်တွေ့သွားတဲ့ မိန်းမငယ်လေးဟာ ကြည်လင် လှိုက်လှဲစွာ ပြုံးပြတဲ့အတွက် ကျွန်တော် အတော့်ကို အံ့သြသွားမိပါတယ်.. သူမရဲ့ တေးသွားပြီးဆုံးလို့ ခနနားတဲ့အချိန်မှာ မိန်းကလေးဟာ ကျွန်တော့်စားပွဲကို ရောက်လာပါတယ်။
ကောင်မလေးက ကျွန်တော့်ကို “မင်္ဂလာပါ.. ရှင် ကျွန်မရဲ့အဖွားကို စန္ဒရား ရောင်းပေးခဲ့ဖူးတဲ့သူ ဟုတ်တယ် မဟုတ်လားဟင်?” လို့ နှုတ်ဆက်ရင်းက မေးလိုက်ပါတယ်… ရုတ်တရက်တော့ ကျွန်တော့မှတ်ဥာဏ်က အလုပ်မလုပ်ပါဘူး.. မိန်းခလေး ပြောတာကို နားမလည် တာနဲ့ ပြန်ရှင်းပြ ဖို့ တောင်းဆိုတော့ ကောင်မလေးက လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်၂၀က အကြောင်း ပြန်ပြောင်း လို့ ပြောပါတော့ တယ်.. ဒီတော့မှ ကျွန်တော် မှတ်မိလိုက်ပါပြီ. အိုး.. ဘုရားရေ… ဒီကောင်မလေးတဲ့လား.. လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ် ၂၀လောက်က ဖိနပ်မပါတဲ့ အ၀တ်ကလေး ညစ်နွမ်းနွမ်းနဲ့ ကောင်မလေးဟာ ဒီလိုလက်သံနဲ့ စန္ဒရားကို တီးခတ်နိုင်သူ ဖြစ်လာခဲ့တယ် တဲ့လား။
ကောင်မလေးက သူမရဲ့ နံမည်က အဲလစ်ဇ် ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ သူမငယ်စဉ်က စန္ဒရား သင်တန်း တက်ဖို့ ငွေကြေး မတတ်နိုင်တဲ့ အတွက် သူမရဲ့အဖွားက ရေဒီယို နားထောင်စေပြီး စန္ဒရားကို လေ့ကျင့် ခဲ့ရကြောင်း၊ ပြီးတော့ စန္ဒရား တီးပြခွင့်ရဖို့ အတွက် အိမ်နဲ့ ၂မိုင်ကျော် လောက် ဝေးတဲ့ ဘုရားကျောင်းကို မြေးအဖွား ၂ယောက်သား လမ်းလျှောက်ပြီး သွားခဲ့ရ တာတွေ၊ ထို့နောက် သူမတက်နေတဲ့ကျောင်းက စန္ဒရားတီးပြိုင်ပွဲတွေမှာ စပြီး ဆုများစွာ ရရှိခဲ့တာတွေ၊ ဂီတနဲ့ပါတ်သက်တဲ့ ကျောင်းတွေမှာ တက်ရောက်ခွင့် ပညာသင်ဆု ရခဲ့တာတွေ၊ နောက်ဆုံး အခု မဲမ်ဖစ်မှာ ရှေ့နေတစ်ယောက်နဲ့ အိမ်ထောင်ကျပြီး အခု တီးနေတဲ့ စန္ဒရားလေးကို သူ့အမျိုးသားက သူမအတွက် လက်ဆောင်ဝယ်ပေးကြောင်း စသဖြင့် ဇာတ်လမ်းစုံ ကို ပြောပြပါတယ်။
ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ တစ်စုံတစ်ရာရဲ့ စေ့ဆော်ချက်ကြောင့် သိချင်စိတ်လေးတစ်ခု ဖြစ်လာတာနဲ့ “အဲလစ်ဇ်..... ဒီနေရာက မှောင်နေတော့ သဲသဲကွဲကွဲ မမြင်ရဘူး.. သမီးရဲ့ စန္ဒရားက ဘာအရောင်လေးလဲ ” လို့မေးလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော် စကားပြန်မပြောနိုင်လောက်အောင် ဆွံ့အသွားမိတယ်.. ဘာမှကို ပြန်မဖြေနိုင် လိုက်နိုင်ပါဘူး.. လည်ချောင်းတွေဟာ ချက်ခြင်းဘဲ ခြောက်သွေ့ အက်ကွဲ လာတယ်.. ဒီကောင်မလေးဟာ သူ့အဖွား ဖြစ်သူရဲ့ အကြီးမားဆုံး လိုအင်ဆန္ဒ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အနီရောင် မဟော်ဂနီစန္ဒရား အကြောင်း ကောင်းကောင်းသိပါရဲ့လား.. မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် စိတ်အား ထက်သန် ပြင်းပြမှုနဲ့ အကြိမ်ကြိမ် အဖန်ဖန် မလျှော့သော ဇွဲလုံ့နဲ့ သူမလိုချင်တဲ့ အနီရောင် မဟော်ဂနီ စန္ဒရားကို မရမချင်း စာတွေ အကြိမ်ကြိမ် ရေးပို့ခဲ့တဲ့ သူမအဖွားရဲ့ စိတ်ဆန္ဒ အားကောင်းမှုကို ဒီကလေးမဟာ သိခဲ့ပါရဲ့လား..
ပြီးတော့ ဆင်းရဲနုံချာလှပြီး ဖိနပ်လေးတောင် မစီးနိုင်တဲ့ စုတ်ပြတ် နွမ်းဖတ်နေတဲ့ ကလေးမလေးဟာ လက်ဖျားခါရလောက်အောင် ပြောင်မြောက်ထူးချွန်တဲ့ ပညာရှင် တစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀နဲ့အတူ သိမ်မွေ့လှပတဲ့ မိန်းခလေးတစ်ယောက် ဖြစ်လာအောင် ဘယ်လို တွန်းအားတွေ၊ ခွန်အားတွေနဲ့ များ ဖြစ်တည်လာခဲ့ပါသလဲ.. ကောင်မလေးဟာ သူဘယ်လို တွန်းအားတွေကြောင့် ဒီလိုဖြစ်လာတယ် ဆိုတာ သူမကိုယ်တိုင် သိချင်မှ သိပါလိမ့်မယ်.. ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် သိနေခဲ့တယ်.. သေသေချာချာကို သိနေခဲ့တာပါ.. ဒါဟာ အဖွားအိုရဲ့ ပြင်းပြတဲ့ စိတ်ဆန္ဒနဲ့ ကြိုးပမ်းချက်ကြောင့်သာ မဟုတ်ခဲ့ရင် ဒီမိန်းခလေးဟာ ဒီလို ထူးချွန်သူတစ်ယောက် ဖြစ်လာဖို့ မလွယ်ကူ ပါဘူး။ စေတနာမေတ္တာ ကြီးမားလှပြီး ဇွဲကောင်းလှတဲ့ အဖွားအိုဟာ ချီးကျူးစရာ ကောင်းလောက်အောင် သူမရဲ့မြေးကို လိုသလို ပုံသွင်းပြီး အောင်မြင်မှု ပန်းတိုင်ကို ရောက်အောင် သွားနိုင်စေခဲ့တယ်.. အဖွားအိုဟာ သူမမြေးမလေး ခုလို အောင်မြင်နေတာ၊ လူလားမြောက်နေတာကို မြင်တွေ့ခွင့်ရော ရသွားပါရဲ့လား.. အဖွားအိုရဲ့ မမြင်နိုင်တဲ့ မေတ္တတရားကို ကျွန်တော် ကတော့ ကောင်းကောင်းကြီး မြင်တွေ့လိုက်မိပါရဲ့…
နောက်ဆုံးတော့ တဒင်္ဂ ပျောက်ရှသွားတဲ့ ကျွန်တော့ အသံကို ကျွန်တော် ပြန်ရှာတွေ့ပြီး လည်ချောင်းကို တစ်ချက် ရှင်းလိုက်ရင်းက “ ဘာမှတော့ မဟုတ်ပါဘူး.. သိချင်လို့ မေးကြည့်တာပါ” လို့ သူမရဲ့ အမေးကို ပြန်ဖြေလိုက်ရပါတယ်.. “ အဲလစ်ဇ် ကို ခုလို တွေ့ရတာ ဂုဏ်ယူလိုက်တာကွယ်.. အင်း.. ဦးလေး ခနလောက် အခန်းကို ပြန်လိုက်ဦးမယ်နော်.. ” လို့ပြောပြီး စားပွဲကနေ အမြန် ထလာခဲ့ရပါတယ်.. ဘာလို့လဲဆိုတော့ ယောက်ျားရင့်မာကြီး တစ်ယောက်က လူပုံလည်မှာ မျက်ရည်ကျဖို့ ဆိုတာ ဘယ်လိုမှ မသင့်တော်ဘူး မဟုတ်လား. ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ လူတွေမှာလည်း ဖြစ်ချင်လွန်း အားကြီးတဲ့ ဇွဲနဲ့ လုံ့လစိတ်သာ ခိုင်ခိုင်မာမာ ရှိမယ် ဆိုရင် စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေ အမှန် တကယ် ဖြစ်မြောက် လာနိုင်တယ် ဆိုတာ ကျွန်တော် လက်တွေ့ သိလိုက်ရပါပြီ။
အဖွားအိုတစ်ယောက်ရဲ့ မေတ္တာတရားနဲ့၊ ချီးကျူးဖွယ် စိတ်အားထက်သန်မှု၊ ဇွဲလုံ့လ ကောင်းမှုတို့ကြောင့် မိန်းမငယ်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ ရည်မှန်းချက်များ အောင်မြင် အကောင် အထည် ဖော်လာနိုင် ခဲ့တာ လေးစား အားကျဖွယ်ဘဲ မဟုတ်ပါလား။ ဒီမြေးအဖွားတို့လို အလွယ်တကူနဲ့ စိတ်အား မလျှော့ဖို့နဲ့၊ ဘယ်အရာကိုမဆို ဇွဲလုံ့လကောင်းကောင်း၊ စိတ်အား ထက်ထက်သန်သန်နဲ့ လုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင် မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ရတဲ့ စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေ အားလုံး တစ်နေ့နေ့တော့ မလွဲမသွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ အသိတရားလေးကို ဖော်ပြနေပါတယ်။
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Saturday, July 14, 2012 Saturday, July 14, 2012 Labels: စိတ်ခွန်အားဖြည့်စာစုများ
တစ်ခါတုန်းက အတော်အသင့် စီးပွားရေးအဆင်ပြေတဲ့ လယ်သမားကြီး တစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ တစ်ရက်မှာ သူတန်ဖိုးထား နှစ်သက်ရတဲ့ အိတ်ဆောင် နာရီလေးတစ်လုံးဟာ စပါးကျီထဲမှာ ကျပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနာရီဟာ သူ့အတွက်တော့ သာမန်နာရီတစ်လုံး မဟုတ်ဘဲ မျိုးရိုးစဉ်ဆက် လက်ဆင့်ကမ်းလာတဲ့ တန်ဖိုးထားစရာ အမှတ်တရတွေ အများကြီးရှိသော ရွှေနာရီလေး ဖြစ်ပါတယ်။ ကောက်ရိုးခြောက်တွေ အထပ်ထပ် ခင်းထားတဲ့ စပါးကျီထဲမှာ နာရီလေးကို အချိန်ပေါင်းများစွာကြာအောင် ရှာပေမဲ့ ဘယ်လိုမှ ရှာလို့ မတွေ့နိုင်ဖြစ်နေပါတယ်။
နောက်ဆုံးမှာတော့ လယ်သမားကြီးဟာ သူတစ်ဦးတည်း ရှာဖွေနေတာကို ရပ်လိုက်ပြီး စပါးကျီနဲ့ မနီးမဝေးမှာ ဆော့ကစားနေတဲ့ ကလေးတစ်အုပ်ကို ခေါ်လိုက်ကာ ကောက်ရိုးပုံထဲ ကျပျောက်သွားတဲ့ နာရီကိုတွေ့အောင် ရှာပေးနိုင်ရင် တွေ့တဲ့သူကို မုန့်ဖိုးပေးမယ်လို့ ကတိပေးပြီး ကလေးတွေကို စပါးကျီထဲ ဝင်ရောက်ရှာဖွေစေပါတယ်။ မုန့်ဖိုးပေးမယ်ဆိုတဲ့ အသံလည်း ကြားရော ကလေးတွေဟာ ဆူညံ ပွက်လောရိုက်ပြီး စပါးကျီထဲကို အလုအယက် ပြေးဝင်သွားကြပြီး သူ့ထက်ငါဦးအောင် ရှာဖွေကြပါတော့တယ်။ ကောက်ရိုးပုံကြီးထဲ ဗြောင်းဆန်အောင် ရှာဖွေကြပေမဲ့ အချိန်သာ ကုန်သွားတယ်။ ဘယ်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်ဆီကမှ တွေ့ပြီ ဆိုတဲ့အသံ ထွက်မလာပါဘူး။ နောက်ဆုံးမှာတော့ ကလေးတွေလည်း လက်လျော့လိုက်ပြီး စပါးကျီထဲကနေ တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ထွက်ခွာသွားကြ ပါတော့တယ်။
လယ်သမားကြီးလည်း စိတ်ဓာတ်ကျပြီး စပါးကျီရှေ့မှာ စိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့ ထိုင်ချလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီချိန်မှာ စောစောတုန်းက ကလေးအုပ်စုထဲမှာပါတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ဟာ စပါးကျီရှေ့ကို ပြန်ရောက်လာပြီး “စပါးကျီထဲမှာ ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်း အေးအေးဆေးဆေး ရှာချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကို ရှာခွင့်ပြုပါ။ ကျွန်တော် ကြိုးစားကြည့်ချင်ပါတယ်” လို့ လယ်သမားကြီးထံ ခွင့်တောင်း လာပါတယ်။ လယ်သမားကြီးဟာ ကောင်လေးကို သေချာ အကဲခတ်ကြည့်ပါတယ်။ ကောင်လေး မျက်နှာပေါ်က ရိုးသားခြင်းတွေနဲ့ အားတက်သရော အမူအရာတွေကို မြင်လိုက်ရတာနဲ့ “ကောင်းပြီလေ.. နောက်ဆုံး လက်လျော့လိုက်ရမဲ့အစားတော့ ခုလို ထပ်ရှာတာက ပိုကောင်းတာပေါ့။ ရှာပါ ခွင့်ပြုပါတယ်။ မင်းသာ ရှာလို့တွေ့ရင်ကတော့ မုန့်ဖိုးကောင်းကောင်း ပေးမယ်ဆိုတာ ငါ ကတိပေးပါတယ်ကွာ” လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။
ကောင်လေးဟာ လယ်သမားကြီးရဲ့ ခွင့်ပြုချက် ရတာနဲ့ စပါးကျီထဲကို ဝင်သွားပါတော့တယ်။ အချိန် သိပ်မကြာခင်မှာတော့ ကောင်လေးဟာ ကောက်ရိုးပုံတွေကြားထဲ ကျပျောက်သွားတဲ့ လယ်သမားကြီးရဲ့ နာရီလေးကို ကိုင်ပြီး စပါးကျီထဲကနေ ထွက်လာပါတော့တယ်။ နာရီလေးကို မြင်လိုက်ရတာနဲ့ လယ်သမားကြီးဟာ အလွန်ပျော်ရွှင်သွားတာနဲ့ အတူတူ အံ့လည်း အံ့သြမိပါတယ်။ လူပေါင်းများစွာ ရှာတုန်းက မတွေ့ဘဲ သူတစ်ယောက်တည်း သွားရှာတော့မှ တွေ့တယ်ဆိုတာ သူ့အတွက်တော့ အံ့သြထူးဆန်း ဖြစ်ရပါတယ်။
ဒါကြောင့်လည်း လယ်သမားကြီးက ကောင်လေးကို “ မင်းဘယ်လိုများ ရှာတွေ့ခဲ့တာလဲကွာ။ ငါလဲ ရှာတာ နေရာလပ် မကျန်အောင်ပါဘဲ။ မင်းနဲ့ မင်းသူငယ်ချင်းတွေလဲ စပါးကျီတစ်ခုလုံး နှံ့နေအောင် ရှာပြီးပြီ..မတွေ့ခဲ့ဘူး. အားလုံးလည်း လက်လျော့ပြီး ပြန်ကုန်ကြပြီ။ အခု မင်း တစ်ယောက်တည်း ရှာတော့မှ ဒီနာရီကို ပြန်တွေ့တယ်ဆိုတာ အတော်ထူးဆန်းတာဘဲ။ ဘယ်လိုရှာခဲ့တယ် ဆိုတာ ငါ့ကို ပြောပြပါဦးကွာ”လို့ မေးလိုက်ပါတယ်။
လယ်သမားကြီးရဲ့ အမေးကို ကောင်လေးက ရိုးရိုးစင်းစင်းဘဲ ပြန်ဖြေပါတယ်။
“ကျွန်တော် ဘာမှ ထူးထူးထွေထွ ရှာဖွေတာမျိုး မလုပ်ပါဘူး။ စပါးကျီထဲရောက်တဲ့အခါ ကြမ်းပြင်ပေါ် ငြိမ်ငြိမ်သက်သက် ထိုင်ချလိုက်ပါတယ်။ စပါးကျီတစ်ခုလုံး တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ပြီး အပ်ကျသံတောင် မကြားရတဲ့အခါမှာ တဖြေးဖြေးနဲ့ ကျွန်တော့်နားထဲကို ဦးလေးရဲ့ နာရီ စက်သံက ဝင်လာပါတယ်။ ဒီတော့မှ အသံကြားတဲ့နေရာမှာ ရှာလိုက်တော့ ဒီနာရီလေးကို တွေ့ရတာပါဘဲ” လို့ ပြန်ဖြေပါတယ်။ ကောင်လေးရဲ့ အဖြေစကား ကြားတော့မှ လယ်သမားကြီးဟာ သူကိုယ်တိုင် ကောင်လေး ရှာသလို တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ရှာဖို့ မစဉ်းစားမိခဲ့ဘဲ နာရီပျောက်သွားပြီ ဆိုတဲ့ အသိစိတ်နဲ့ ပျာယာခတ်အောင် ရှာခဲ့မိတာကို ပြန် သတိရ မိပါတယ်။ တိတ်ဆိတ်ခြင်း ထဲမှာ ပေါ်ထွက်လာမဲ့ နာရီစက်သံလေးကို နားထောင်ရကောင်းမှန်း သူ မသိခဲ့ပါဘူး။ လယ်သမားကြီးဟာ ကောင်လေးရဲ့ ကျေးဇူးနဲ့ နာရီလေးကိုဘဲ ပြန်ရလိုက်တာမဟုတ်ဘဲ သူ့ထက် အသက်များစွာငယ်တဲ့ ကောင်လေးဆီကနေလည်း သင်ခန်းစာလေးတစ်ခုကို သူရလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပုံပြင်လေးဖတ်ပြီး ကျွန်မကိုယ်တိုင်ရဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ ယှဉ်ပြီး ပြန်စဉ်းစားမိပါတယ်။ ကျွန်မသည်လည်း အခက်အခဲ ပြဿနာတစ်ခုခုနဲ့ ကြုံတိုင်း ရုတ်တရက်ဆို သွေးအေးအေးနဲ့ မဖြေရှင်းတတ်ဘဲ ထူထူပူပူဖြစ်ကာ ခြေမကိုင်မိ၊ လက်မကိုင်မိ အမြဲတမ်း ဖြစ်တတ်သူပါ။ “ဒီလောက်ကြီးတဲ့ ပြဿနာ ငါဘယ်လိုရှင်းမှာလဲ၊ ငါတော့ ဖြေရှင်းနိုင်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒုက္ခပါဘဲ။ ဒီလိုကိစ္စမျိုး ငါ့မှာမှ လာဖြစ်တတ်တယ်။ ငါကံဆိုးလိုက်တာ” စသဖြင့် တွေးတောပြီး ပြဿနာတစ်ခုကို မဖြေရှင်းရသေးခင်မှာဘဲ ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ် စိတ်ဓာတ်ကျတာမျိုး၊ စိတ်ညစ်တာမျိုး မကြာခဏ ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
တကယ်တမ်းတော့ အဖြေမရှိတဲ့ ပုစ္ဆာမရှိသလို၊ မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ ပြဿနာဆိုတာ မရှိဘူး ဆိုတဲ့ စကားရပ်အတိုင်း ဘယ်လောက်တောင် ကြီးမားတဲ့ အခက်အခဲတွေ၊ ပြဿာနာတွေဖြစ်ပါစေ.. နည်းလမ်းတကျနဲ့ စိတ်ကို တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ထားပြီး ဖြေရှင်းတဲ့အခါ ပြေလည်သွားတာမျိုး၊ အောင်မြင်အောင် ဖြေရှင်းနိုင်တာချည်းပါဘဲ။ အဲဒါကို တဖြေးဖြေး သိလာပြီးနောက်ပိုင်း ပြဿနာတစ်ခုခုနဲ့ ကြုံရင် သိပ်ပြီး တုန်လှုပ်နေတာ၊ ပျာယာခတ်နေတာမျိုး မဖြစ်ဘဲ စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင် ထားနိုင်ဖို့ အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားလာမိပါတယ်။ အဲဒီမှာ ဖတ်ဖူးမိတဲ့ ဆရာတော်ဦးဇောတိကရဲ့ အဆိုအမိန့်လေး တစ်ခုနဲ့လည်း ထပ်တူကျတာမို့ ပြန်လည် ဝေငှချင်ပါတယ်။
“ အေးအေးဆေးဆေး ပြောတတ်အောင် လေ့ကျင့်ပါ။ အေးအေးဆေးဆေးလုပ်တတ်အောင် လေ့ကျင့်ပါ။ အလျင်လိုတဲ့ အကျင့်ဟာ စိတ်ပင်ပန်းစေတယ်။ အလျင်လိုနေရင် စိတ်မရှည်ဘူး။ အလျင်လိုနေတဲ့သူဟာ စိတ်တိုဖို့ များတယ်။ မှားလို့ ပြန်လုပ်ရရင် အချိန်ပိုကုန်တယ်။ ဒါကြောင့် အလျင်လိုရင် အရနှေးတယ်လို့ ပြောတာ။ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ သေသေချာချာ တိတိကျကျ လုပ်တတ်တဲ့ အလေ့အကျင့်ဟာ ရေရှည်မှာ စိတ်အေးချမ်းမှုကို ပေးတယ်။” စတဲ့ စကားတွေဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာတော်ရဲ့ စကားလုံးတွေဟာ ကျွန်မအတွက်တော့ အလွန်ကို တန်ဖိုးရှိတဲ့ စကားလုံးတွေဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ် မြင်သာ ထင်ရှားတဲ့ ဥပမာတစ်ခု အနေနဲ့ ပြောရမယ် ဆိုရင် ကန်ထဲမှာ ဖြစ်ဖြစ်၊ အိုးထဲမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ခွက်ထဲမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ရှိနေတဲ့ တည်ငြိမ်နေတဲ့ ရေမျက်နှာပြင်မှာ ကြည်လင်တဲ့ မိမိရဲ့ အရိပ်ကို ထင်ရှားစွာ တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလို မဟုတ်ပဲ ရေမျက်နှာပြင်ဟာ လှုပ်ရှားနေမယ်၊ တည်ငြိမ်မှု မရှိဘူး၊ လှိုင်းတွေ ထနေမယ် ဆိုရင် မိမိရဲ့ ပုံရိပ်၊ မိမိကြည့်လိုတဲ့ မြင်ကွင်းကို ဘယ်လိုမှ ထင်ရှားစွာ မြင်တွေ့ရဖို့ ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အဲဒီဥပမာနဲ့ အလားတူစွာပဲ ရေမျက်နှာပြင်နဲ့ တူတဲ့ အလွယ်တကူ လှုပ်ရှား လှိုင်းထလွယ်တဲ့ မိမိရဲ့ စိတ်ကိုလည်း သတိဆိုတဲ့ မိမိစိတ်ကို မိမိစောင့်ကြည့်ခြင်း နည်းလမ်း အကူအညီနဲ့ ကြုံလာသမျှ အခြေအနေတိုင်းမှာ တတ်နိုင်သမျှ တည်ငြိမ်အောင် ထိန်းသိမ်းနိုင်မယ် ဆိုရင်တော့ အရာရာတိုင်းကို မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ အကောင်းဆုံး ရှုမြင်သုံးသပ်ပြီး ဆုံးဖြတ်လုပ်ကိုင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဘယ်လိုအခက်အခဲ၊ ဘယ်လိုပြဿနာမျိုးဘဲ ကြုံကြုံ အရင်ဆုံး ကိုယ့်စိတ်ကိုယ် အတတ်နိုင်ဆုံး ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း ဖြစ်အောင်ထားပြီး တွေ့ကြုံနေရတဲ့ ပြဿနာကို သေသေချာချာ မြင်အောင်ကြည့်ကာ စိတ်အေးအေး၊ ခေါင်းအေးအေးနဲ့ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းကြရင်ဖြင့် ဘဝရဲ့ ဘယ်အခက်အခဲ ပြဿနာတွေကိုမဆို အောင်မြင်မှုရရှိကြမှာ မလွဲဘူး မဟုတ်ပါလားရှင်။
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Tuesday, March 13, 2012 Tuesday, March 13, 2012 Labels: စိတ်ခွန်အားဖြည့်စာစုများ
တစ်နေ့သောအခါမှာ အထက်တန်းကျောင်း တစ်ကျောင်းရဲ့ စာသင်ခန်းတစ်ခုကို သင်ကြားတဲ့ ဆရာမ တစ်ယောက်ဟာ သူ့အတန်းထဲက ကလေးတွေကို တစ်ယောက်ချင်း အတန်းရှေ့ကို ခေါ်ထုတ်ပြီး သူတို့ဟာ ဆရာမဖြစ်သူ သူ့အတွက်ရော၊ အတန်းကိုပါ ထူးထူးခြားခြား ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ သူတွေ ကို လက်ဆောင်တစ်ခုစီ ပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ အတန်းထဲက ကျောင်းသား တစ်ဦးချင်းစီကို အတန်းအတွက်ရော၊ ဆရာမအတွက်ပါ ထူးထူးခြားခြား ဖြစ်စေခဲ့တဲ့ သူတွေလို့ ချီးကျူးစကားပြောပြီး လက်ဆောင် တစ်ခုစီ ပေးပါတယ်။ အဲဒီလက်ဆောင်က အပြာရောင် ဖဲကြိုးလေး တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဖဲကြိုးပေါ် မှာတော့ ရွှေရောင် စာလုံးလေးနဲ့ ရိုက်နှိပ်ထားတာက “ကျွန်တော်ဟာ ထူးခြားတဲ့သူ” ဆိုတဲ့ စာလုံးလေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးတွေဟာ ဆရာမရဲ့ လက်ဆောင် ဖဲကြိုးပြာ ကလေးတွေ ကိုယ်စီနဲ့ ပျော်ရွှင်ကျေနပ်လို့ နေကြ ပါတယ်။
တစ်လလောက် ကြာတဲ့အခါမှာ ဆရာမဟာ သူ့အတန်းထဲက ကလေးတွေကို ဖဲကြိုးပြာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စီမံကိန်းလေး တစ်ခု ပြုလုပ်ဖို့ အကြံရပါတယ်။ အဲဒီ စီမံကိန်းကတော့ ကလေးတွေကို ဖဲကြိုးပြာ သုံးခုစီပေးပြီး အတန်းပြင်ပကို ထွက်ခိုင်းကာ အခြားသော လူတွေကို ဒီ ဖဲကြိ်ုးပြာ ကလေးတွေ ကို ဝေငှစေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့လည်း အဲဒီ ဖဲကြိုးကို ဝေငှခံရသူတွေဟာ ဝေငှ တဲ့ ကျောင်းသား ကိုယ်တိုင်က လေးစားရတဲ့သူ၊ ချစ်ခင်နှစ်သက် ရတဲ့သူ ဖြစ်ဖို့လည်း လိုပါတယ်လို့ ဆရာမက ညွှန်ကြားချက် ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီလို ဖဲကြိုးပြာလေးကို မိမိ လေးစားတန်ဖိုးထားရသူတွေကို လက်ဆင့်ကမ်း ပေးလိုက်ခြင်းအားဖြင့် ရရှိလာမဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှု၊ အပြောင်းအလဲကို ဆရာမက စိတ်ဝင်စားတဲ့ အတွက် ကြောင့်ပါ။ အဲဒီစီမံကိန်း စတာနဲ့ အတန်းထဲက ကျောင်းသားလေး တစ်ဦးဟာ သူတို့ကျောင်းနဲ့ မဝေးလှတဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုက လက်ထောက် မန်နေဂျာလေး တစ်ဦးဆီကို သွားပြီး ဖဲကြိုးပြာလေးတစ်ခုကို သူ့ရဲ့ ရှပ်အင်္ကျီပေါ် ထိုးပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီ လက်ထောက် မန်နေဂျာလေး ဟာ ကျောင်းသားဖြစ်သူ လေးစားရတဲ့သူ တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်း ဆိုတော့ ကျောင်း သားလေးကို ထို လက်ထောက်မန်နေဂျာလေးက အကူအညီ အများကြီး ပေးခဲ့ဖူး တာကြောင့်ပါ။
ထို့နောက် ကျောင်းသားလေးဟာ လက်ထောက်မန်နေဂျာလေးကို သူရထားတဲ့ နောက်ထပ် ဖဲကြိုးပြာလေး ၂ခုကိုပါ ပေးလိုက်ပြီး “ ကျွန်တော်တို့ဟာ အတန်းရဲ့ စီမံကိန်းတစ်ခုကို လုပ်နေကြတာပါ။ ဆရာမက ဖဲကြိုးပြာ ၃ခုကို ကျွန်တော်တို့ တစ်ဦးစီကို ပေးပြီး တစ်ခုကို ကိုယ်လေးစား အားကျရတဲ့သူကို ပေးပြီး ကျန်တဲ့ ၂ခုကို အဲဒီလူက သူလေးစားအားကျရ၊ အလေးအနက် တန်ဖိုးထားရတဲ့ အခြားသူတစ်ဦးကို ပေးဖို့ ညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီဖဲကြိုးပြာ ၂ခုကို ခင်ဗျားက လက်ခံယူပြီး ခင်ဗျားလေးစား တန်ဖိုးထားရတဲ့သူကို ပေးလိုက်ပါ။ အဲဒီလူကလည်း ကျန်တဲ့ ဖဲကြိုးတစ်ခုကို သူလေးစားတဲ့သူ၊ သူ တန်ဖိုးထားရတဲ့သူကို ထပ်ပြီး ပေးပေးပါ။ ပြီးရင် ဒီဖဲကြိုးပြာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တစ်စုံတစ်ခု ထူးခြားရင် ကျွန်တော့်ကို ပြန်ပြောပြပါ” လို့ မှာလိုက်ပါတယ်။
ဖဲကြိုးပြာလေးကို လက်ခံရရှိတဲ့ လက်ထောက်မန်နေဂျာကလေးဟာ သူ့အလုပ်ရှင် သူဌေးကို သွားရောက် တွေ့ဆုံပါတယ်။ သူဟာ သူဌေးရဲ့ ရှေ့ကခုံမှာ ထိုင်လိုက်ပြီး ဖဲကြိုးပြာလေးကို လက်ဆောင် အဖြစ် လက်ခံဖို့ သူဌေးကို တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ ရုတ်တရက် မမျှော်လင့်ဘဲ တောင်းဆို ခံရတဲ့ သူဌေးဖြစ်သူဟာ အံ့သြသွားပြီး “ဒီဖဲကြိုးပြာကို ဘာဖြစ်လို့ ဦးကို လက်ဆောင်ပေးချင်ရတာလဲ” လို့ မေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီတော့ မန်နေဂျာကလေးက “သူဌေးဟာ အလုပ်ထဲမှာ ကျွန်တော်လေးစားရတဲ့ သူတစ်ဦးပါ။ ပြီးတော့ သူဌေးဟာ ဒီလောက် ကြီးကျယ်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီး တစ်ခုလုံး ကို အောင်အောင် မြင်မြင်နဲ့ ဦးစီးနိုင်တဲ့ သူပါ။ အဲဒီလို အောင်မြင်တာဟာလည်း သူဌေးရဲ့ ထူးချွန် ထက်မြက်မှုကြောင့်ပါ။ ဒါကြောင့်လည်း သူဌေးဟာ ကျွန်တော် လေးစားအားကျရတဲ့ သူတစ်ဦး ဖြစ် ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော် လေးစားရတဲ့ သူဌေးကို ဒီဖဲကြိုးပြာလေး ဂုဏ်ပြု လက်ဆောင် ပေးချင်လို့ပါ ”လို့ ပြောလိုက်တော့ သူဌေးရဲ့ မျက်နှာဟာ အစောကထက်တောင် ပိုပြီး အံ့သြသွားဟန်ရှိပါတယ်။
ထို့နောက်တော့ သူဌေးဟာ မန်နေဂျာလေးရဲ့ မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်ပြီး “ကောင်းပြီလေ. မင်းရဲ့ ဖဲကြိုးပြာ လက်ဆောင်ကို ငါလက်ခံပါတယ်” လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ မန်နေဂျာလေးဟာ ဖဲကြိုးအပြာတစ်ခုကို ယူလိုက်ပြီး သူဌေးရဲ့ အပေါ် ကုတ်အင်္ကျီရင်ဘတ်လေးမှာ ထိုးပေးလိုက်ပြီး ဖဲကြိုး နောက်တစ်ခုကိုတော့ သူဌေးလက်ထဲ ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ “သူဌေး ကျွန်တော့်ကိုတစ်ခုလောက် ပြန်ကူညီပါ။ ဒီဖဲကြိုးပြာလေး တစ်ခုကိုလည်း သူဌေးက လက်ခံပြီး သူဌေးကိုယ်တိုင်က လေးစားရတဲ့သူ၊ ချစ်ခင်မြတ်နိုးရတဲ့ သူ တစ်ဦးဦးကို ဒီဖဲကြိုလေးကို လက်ဆောင်အဖြစ် ပေးပေးပါ။ ဒီကိစ္စဟာ ကျောင်းသားလေးတစ်ဦးက ကျွန်တော့်ကို အကူအညီတောင်းတာပါ။ ဒီဖဲကြိုးပြာလေးကို လက်ခံရရှိတဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်ဟာ ဘယ်လိုများ အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်သွားသလဲဆိုတာကို သူ့ကို ပြန်ပြောဖို့ မှာလိုက်လို့ပါ” လို့ ပြောတော့ သူဌေးကလည်း ဖဲကြိုးကို လက်ခံပြီး သဘောတူလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီနေ့ညမှာဘဲ ဖဲကြိုးပြာလေးကို လက်ခံရရှိတဲ့ သူဌေးဟာ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ သူရဲ့ အသက် ဆယ့်လေးနှစ်အရွယ် သားကလေးကို ခေါ်ပြီး သူ့အနားမှာ ထိုင်စေလိုက်ကာ “ဒီနေ့တော့ ဖေဖေ့အတွက် အရမ်းကို အံ့သြထူးဆန်းပြီး စိတ်လှုပ်ရှားရတဲ့ နေ့ပါဘဲ သားရေ… ဖေဖေ့ ကုမ္ပဏီက မန်နေဂျာလေး တစ်ယောက်က ဖေ့ဖေ့ကို လေးစားချစ်ခင်လို့ဆိုပြီး ဒီဖဲကြိုးပြာလေးကို လက်ဆောင်အဖြစ် ပေးလာတယ်။” လို့ သူ့ရင်ဘတ်ပေါ်က ဖဲကြိုးပြာလေးကို လက်လေးနဲ့ ပုတ်ပြကာ ပြောပြပါတယ်။ “ သားစဉ်းစားကြည့်.. သူဟာ ဖေ့ဖေ့ကို ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့သူ ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ ဖဲကြိုးပြာလေးကို ဖေဖေ့ကို ဂုဏ်ပြူတဲ့အနေနဲ့ လက်ဆောင် ပေးလိုက်တယ်လေ။ ပြီးတော့လည်း သူက နောက်ထပ် ဖဲကြိုးပြာလေးတစ်ခုကို ဖေဖေ့ကို ထပ်ပေးပြီး အဲဒီ ဖဲကြိုးကလေးကိုတော့ ဖေဖေက ချစ်ခင်လေးစားရတဲ့ ၊ ဂုဏ်ပြုချင်တဲ့သူ တစ်ဦးဦး ကို ပေးပေးပါ ဆိုပြီး ပြောလာတယ်” ဖခင်ဖြစ်သူက သူ့သားဟာ သူ့ရဲ့စကားတွေကို စိတ်ဝင်တစား နားထောင်နေမနေ တစ်ချက် အကဲခတ်လိုက်ပြီးမှ ဆက်ပြောပါတယ်။
“ဖေဖေ အိမ်ပြန်လာတဲ့လမ်းမှာ ကားမောင်းနေရင်း တလျှောက်လုံး စဉ်းစားလာမိတယ်။ ဖေဖေ ဒီ ဖဲကြိုးလေးကို အပေးချင်ဆုံး သူဟာ ဘယ်သူလဲလို့ပေါ့။ နောက်ဆုံးတော့ သားကိုဘဲ ဖေဖေ စဉ်းစားမိတယ်။ သားကို ဖေဖေဂုဏ်ပြုချင်ပါတယ်။ သားသိတဲ့အတိုင်း ဖေဖေဟာ အရမ်းကို အလုပ်များတဲ့ အတွက် သားကို အချိန် မပေးနိုင်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ အလုပ်ကနေ အိမ်ပြန်ရောက် တော့လည်း ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေတော့ သားကို ဂရုမစိုက်မိဘူး။ တခါတလေ ကျောင်းက စာမေးပွဲမှာ သားအမှတ်ကောင်း မရတဲ့အခါ ဖေဖေက သားကို ဂရုတစိုက် ဖေးမရမဲ့အစား အော်ဟစ်ဆူပူမိတယ်။ သားရဲ့ စိတ်ကို အနာတရဖြစ်အောင် ဖေဖေလုပ်ခဲ့မိတယ်။ ဒီနေ့တော့ ဖေဖေက သားကို ဒီကိုခေါ်ပြီး အနားမှာထိုင်စေတာက ဒီဖဲကြိုးပြာလေး ပေးချင်လို့ပါ။ သားဟာ ဖေဖေ့အတွက် အရေးအကြီးဆုံး သူတစ်ဦးပါ။ သားဟာ လူတော်လေးတစ်ဦးပါ။ ဖေဖေ သားကိုချစ်ပါတယ် သားရယ်” ဖခင်ဖြစ်သူဟာ စကားကို အဆုံးသတ်လိုက်ပြီး သူ့လက်ထဲက ဖဲကြိုးပြာလေးနောက်တစ်ခုကို သူ့သားရဲ့လက်ထဲကို ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီအခါမှာ ကောင်ကလေးရဲ့ ပါးပြင်ပေါ်မှာ မျက်ရည်ပေါက်များ လိမ့်ဆင်းလာပြီး ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုကြွေးပါတယ်။ ထို့နောက် ရပ်တန့်လို့ မရနိုင်တော့ လောက်အောင်ကိုဘဲ တစ်ကိုယ်လုံးကို တစ်သိမ့်သိမ့် တုန်ခါပြီး ဆက်ခါဆက်ခါ ငိုကြွေးပါတယ်။ ဖခင်ဖြစ်သူက သားကို ညင်သာစွာ ပွေ့ဖက်ပြီး “ သား.. ဘာဖြစ်လို့လဲ.. ဘာကြောင့် ဒီလောက်တောင် ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုကြွေးနေတာလဲ. ဖေဖေ့ကို ပြောပြပါဦး” လို့ နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့ အသံနဲ့ ပြောတဲ့အခါမှာ သားဖြစ်သူဟာ မျက်ရည်တွေပြည့်လျှံနေတဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ့ ဖခင်ကို ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ ထို့နောက် သူ့ပါးစပ်ကနေ စကားတွေ တစ်လုံးချင်း ထွက်လာပါတော့တယ်။
“ကျွန်တော်ဟာ မနက်ဖြန်ကျရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေတော့မယ်လို့ စိတ်ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့တာပါ။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ဖေဖေက ကျွန်တော့်ကို ဘယ်တော့မှ ဂရုမစိုက်ဘဲ အမြဲတမ်း အော်ဟစ် ဆူပူနေခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် ဖေဖေ ကျွန်တော့်ကို မချစ်ဘူးလို့ဘဲ ထင်ခဲ့မိတယ်။ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း သားအဖတွေကို ကြည့်လိုက်ရင် သိပ်အားကျဖို့ကောင်းခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်ကို အဖေက မချစ်ပေမဲ့ သူတို့ အဖေတွေကတော့ သားတွေကို သိပ်ချစ်တယ်လို့ ကျွန်တော် ထင်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် ဖေဖေ့ရဲ့ ချစ်ခင်ခြင်းကို မခံရတဲ့ သားတစ်ယောက် အနေနဲ့ ဒီလောကကြီးထဲမှာ မနေချင်တော့လို့ ကျွန်တော် ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေတော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ။ ခုတော့..... ခုတော့ ဖေဖေက ကျွန်တော့်ကို ချစ်တယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရလို့ ဒီလိုလုပ်ဖို့ မလိုတော့ဘူး ဆိုတာ ကျွန်တော်သိသွားပါပြီ ” လို့ အသက် ဆယ့်လေးနှစ်အရွယ် သားကလေးက ဖခင်ပေးလိုက်တဲ့ ဖဲကြိုးပြာလေးကို တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်ရင်း မျက်ရည်တွေကြားကနေ အပြုံးတစ်စနဲ့အတူ ပြောလိုက်ပါတော့တယ်။
ဖဲကြိုးပြာစီမံကိန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရရှိလိုက်တဲ့ ရလဒ်အတွက် ဆရာမရော အတန်းထဲက ကလေးတွေ ပါ ကျေနပ်ပျော်ရွှင်နေကြမယ် ဆိုတာ သေချာပါတယ်။ ကျွန်မတို့လည်း ကိုယ်ချစ်ခင် မြတ်နိုးတဲ့သူ၊ လေးစား တန်ဖိုးထားရတဲ့ သူတွေကို ဖဲကြိုးပြာနဲ့တူတဲ့ အသိအမှတ်ပြုမှုမျိုး ၊ ချစ်ခင် လေးစားမှုမျိုးကို ပြဖို့ ဝန်မလေး သင့်ကြပါဘူးနော်။
The Three Blue Ribbons ( Unknown Author) ကို ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်ရေးဖွဲ့ပါသည်။